बिजशालासँग शनिवार(बिजशालासँग शनिवार) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अर्गानिक सेन्टर: जहाँ पैसासँगै जन्मछन् कविताहरु !
'नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन, समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान' अञ्जना इछमफुलले गरिरहेको व्यवसायको नारा नेपालीमा यस्तो छ । Promoting Nepali products for prosperous Nepal लेखिएको छ उनको भिजिटिङ कार्डमा । नेपाली उपादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेर आरम्भ गरिएको व्यवसायको नाम छ, कोसेली ढाका एण्ड अर्गानिक सेण्टर । काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनको होलसेल र रिटेल पसल छ । अञ्जना इछमफुल...
‘के माया लाग्छ र ?’ गीतका सर्जकसँग पैसा गफ
अचेल एउटा गीत सबैको जिब्रोमा झुण्डिएको छ, त्यो हो ‘के माया लाग्छ र ?’ यस गीतमा प्रयुक्त उख्खुमै, हुरहुरी, गुटुङटुङ जस्ता नेपाली ठेट शब्दहरु अचेल कुराकानीका सिलसिलामा पनि प्रयोग भइरहेका पाइन्छन् । ‘सुन साइँली’बाट नेपाली गीतलेखनमा चर्चामा आएका गीतकार हर्क साउद अहिले फेरि चर्चामा छन्, यस्तै शब्द र यही गीतका कारण पनि । डोटीबाट...
पहिलोपटक पैसा छोएको कथा
नरेन्द्रकुमार नगरकोटी पैसा भन्नेबित्तिकै तपाईंको दिमागमा के कुराको चित्र आउँछ ? सायद रु. १००० वा ५०० का नोट तथा बिटाका बिटा पैसाको दृश्य आउँछ होला। तपाईंले पैसा सुनेको, देखेको वा पहिलोपटक स्पर्श गरेकोे सम्झना गर्नुपर्दा कस्ता कथाहरु आउँछन् ? मेरी आमा धारामा नुहाउने–धुने काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। मैले धाराकै छेऊमा दराजको साँचोको...
अरुले खिसीट्यूरी गरे, बुबाले लुगा सिलाउने मेसिन किनिदिए
राधा सापकोटा ढकाल २०४२ सालमा गोरखामा जन्मिएकी हुन् । इगल आइज फेसन हाउस, न्यूरोडका प्रोप्राइटर सापकोटा १३ वर्षदेखि फेसन डिजाइन क्षेत्रमा समर्पित छिन् । नेपाल आइडल सिजन–३ को डिजाइन पार्टनर भएर काम गर्नुका साथै मिस नेपाल, विवाह, इभेण्टहरु डिजाइन गरिसकेको इगल आइज फेसन हाउसको सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग उनको फेसन जीवनको प्रवेश, सङ्घर्ष र...
पालिका र जनप्रतिनिधिलाई डिजीटल नेपालको यात्रा गराउँदै
हामीले सुन्दै आएका छौँ, ‘स्मार्ट’ शब्द। स्मार्ट सिटी बनाउने समाचारहरु पनि सुन्दै अनि पढ्दै आएका हौँ। कस्तो हुन्छ त स्मार्ट ? ‘स्मार्टपालिका’ नामले सुरु गरेकोे अभियानमा रहेका ३१ वर्षका मनोज भट्टराई पालिकाहरुलाई स्मार्ट बनाउन लागिपरेका छन्। स्थानीय तहलाई स्मार्ट बनाउन के भइरहेको छ त ? किशोरवय पार गरेलगत्तै आईटी क्षेत्रमा...
‘झोले एजेन्सी अब बन्द हुन्छन्’
कोरोना महामारीले व्यवसाय थला परेको समय भएका कारण आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गर्ने अवस्था र मुडमा व्यवसायीहरु नभएको अवस्थामा वेलकम एड ग्रुपका अध्यक्ष ‘एडगुरु’ निर्मलराज पौडेल भने आफ्नो व्यवसाय र उत्पादनको दिगो प्रभाव छाडिराख्न मानिसहरुले हेरिरहेका र पढिरहेका माध्यमबाट झन् विज्ञापन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । लकडाउनले विज्ञापन...
आमाको इच्छा थियो डाक्टर बनाउने, बनिन् निजी क्षेत्रको नेता
नेपाली उद्योगको क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति एकदम न्यून छ । महिला उद्यमीहरुको नाम लिनुपर्दा आउने एकदम थोरै नाममध्ये भवानी राणाको नाम अग्रसूचिमा आउँछ । भवानी राणा, नेपाली उद्यमको क्षेत्रमा एउटा गर्विलो नाम हो । महिला उद्यमीहरुको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने हस्ताक्षर हुन् उनी । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था र सरकारपछि सबैभन्दा...
‘माया त लाउने मन थियो, खड्काको घरले छेक्दियो...’
‘प्रेम’ के हो ? ‘प्रेम’ शब्दले किन एउटा सम्मोहन सिर्जना गर्छ ? के प्रेम विपरीत लिङ्गीबीच हुने आकर्षण वा आशक्तिमात्र हो त ? वा, हो एउटा शास्वत प्राकृतिक सत्य । प्रेमले सेक्स, पैसा र विवाह जरुरी ठान्छ कि ठान्दैन ? प्रेम कसरी बाँच्छ ? हाम्रा मनमा जागिरहने यिनै प्रश्नमा केन्द्रित भएर बैंकर अनलराज भट्टराईले बिजशालालाई आफ्नो अनुभव,...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा अहिलेसम्म कति पर्यो आवेदन ?
खोप कार्ड हरायो ? यी ३ तरिकाबाट लिन सकिन्छ प्रतिलिपि
विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा छुट्टै मिटर राख्न पाइने, चार्जिङ स्टेसनका लागि यस्ता छन् व्यवस्था
अपार्टमेन्टमा बस्नेहरुले अब सीधै प्राधिकरणबाट विद्युत सेवा लिन पाउने